Ewebataghachi ụgwọ iji gbochie ndụmọdụ gbasara ọnwụ - Echiche 2022
Ewebataghachi ụgwọ iji gbochie ndụmọdụ gbasara ọnwụ
Na Jenụwarị 2021, Kọmịshọna Nchekwa Ndị Ahịa* wepụtara akụkọ gbasara ọnụọgụ ihe mberede metụtara otu arịa ụlọ ma ọ bụ igwe onyonyo dakwasịrị mmadụ. N'ime mmadụ 571 nwụrụ, 469 bụ ụmụaka na-erubeghị afọ 18. Akụkọ ahụ kpuchiri afọ n'etiti 2000 ruo 2019.
Na Jenụwarị 2018, ** CPSC wepụtara akụkọ yiri nke ahụ, nke metụtara afọ 2000 ruo 2017. Oge ahụ nwere 542 kọrọ ọnwụ, nke 450 metụtara ụmụaka na-erubeghị afọ 14. Ndị ntorobịa iri na itoolu ọzọ tụfuru ndụ ha n'etiti oge akụkọ abụọ ahụ n'ihi na TV ma ọ bụ otu arịa ụlọ anaghị arịlịka. N'ime ọmụmụ abụọ ahụ, ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ọnwụ metụtara telivishọn.
Nwanyị omeiwu Jan Schakowsky, Democrat nke Illinois, na onye nkwado Senator Robert Casey nke Pennsylvania, chọrọ ime ka arịa ụlọ dị nchebe na Nkwụsịtụ Ndụmọdụ nke Unstable, Risky Dressers of Youth Act nke 2021 (STURDY act). Iwu ahụ akwadoro, nke mbụ webatara na 2019 na echeghị ya, Schakowsky na Casey weghachiri ya na February 2021. Ka ọ dị ugbu a, ụgwọ ahụ nwere ndị nkwado 15 na Senate, gụnyere Amy Klobuchar nke Minnesota, Richard Blumenthal nke Connecticut, na Corey Booker. nke New Jersey.
Dị ka Consumer Reports si kwuo, ụkpụrụ nkwụsi ike arịa ụlọ ugbu a bụ afọ ofufo. Achọghị ndị nrụpụta ka ha mee nnwale nchekwa tupu ha etinye arịa ụlọ n'ahịa.
Ọ bụrụ na ọ bụrụ iwu, iwu ahụ ga-eduzi CPSC ka ọ mepụta na manye ụkpụrụ nkwụsi ike maka ngalaba uwe, dị ka igbe, akwa akwa, na ụlọ ọrụ. Ọtụtụ ndị na-azụ ahịa na-akwado iwu a gụnyere ndị nne na nna megide ndụmọdụ ndụmọdụ yana American Academy of Pediatrics.
* Ụlọ ọrụ nchekwa na nchekwa ndị ahịa; Jenụwarị 2021. Akwụsịghị ngwaahịa ma ọ bụ ndụmọdụ gbasara mmerụ ahụ na ọnwụ metụtara igwe onyonyo, ngwa ụlọ na ngwa: mkpesa 2020.
** Ọrụ Nchekwa na Nchekwa Ndị Ahịa; Ọktoba 2018. Akwụsịghị ngwaahịa ngwaahịa ma ọ bụ ndụmọdụ gbasara mmerụ ahụ na ọnwụ metụtara telivishọn, ngwá ụlọ, na ngwa: 2018 Report.
Ndụmọdụ 11 na-ebu ọnụ maka ihe ịga nke ọma, agụụ na mbelata ibu